Saturday December 16, 2017 - 10:14:32 in Wararka by
Mareykanka ayaa Dowladda Federaalka dhan walba ka taageerta
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in ay joojisay taageero dhanka saadka ah oo ay siin jirtay maleeshiyaadka dowladda Federaalka ee ka howlgala gobollada shabeelooyinka iyo magaalada Muqdisho, waxaa lalunsaday shidaal,raashin iyo hub mareykanku ugu talagalay in loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah Shabaabul Mujaahidiin.
Cabdi Xakiim Fiqi oo horay usoo noqday wasiirka G/dhigga DF-ka ayaa arrintan ku tilmaamay guul darro weyn oo usoo gashay dowladda Federaalka isagoo dhaliil ujeediyay madaxda ugu sarraysa DF-ka oo u sheegay in ay ku fashimeen dajinta nidaam hufan oo ka fog musuq maasuqa iyo wax isdaba marinta wuxuuna carabaabay in taageerada Mareykanka ee Maleeshiyaadka DF-ka ay muhiim gaar ah u laheyn dagaalka Ashahaadda ladirirnimo balse isagu uu ku sifeeyay 'Howlgal argagaxiso ladirir ah'.
Sarkaal sare oo ka tirsan Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa VOA-da u xaqiijiyay, in Mareykanka uu hakinayo gargaarki uu siin jiray ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in ay go'ankan qaadatay kadib markii ay saraakiisha milatariga Soomaaliya marar badan ku guuldarreysteen isla xisaabtanka gargaarka lagu taakuleeyo ciidanka, sida cuntada, shidaalka iyo hubka.
Waxa kale oo uu Mareykanku sheegay in hakintani ay qeyb ka tahay sidii loo xaqiijin lahaa in kaalmada la siin jiray ciidanka Soomaaliya loo isticmaalay sidii loogu tala galay.
Dokuminti ay faafisay wakaalada wararka Reuters ayaa lagu sheegay,a in hogaanka milatariga Soomaaliya uu ku guuldareystay inuu si sax ah u bixiyo cuntada, qalabka iyo mushaarka ciidamada, xilli dowlada Mareykanka ay ku taageerto ciidamada Soomaaliya boqollaal milyan oo doollar.
Wakaaladda ayaa sheegtay in koox khubaro ah oo isugu jirta Soomaali iyo Mareykan ay booqdeeb illaa sagaal xero oo ay ciidanka DF-ka ku leeyihiin Soomaaliya bilihii May iyo June 2017, waxayna khubaradaasi soo ogaadeen in marka laga reebo 2 xero oo kaliya intii kale la waayay raashinkii iyo shidaalkii askartaasi cuneen.
Tani waa fadeexad hor leh waxaana larumeysanyahay in Boqolaal Milyan oo dollar ay jeebabkooda ku shubteen madaxda ugu sarraysa dowladda Federaalka, arrinta kale ee xusidda mudan ayaa ah in ciidanka DF-ka aysan mushaar joogta ah qaadan iyadoo la ogyahay in hoggaanka Villa Somalia uu bil walba lacago malaayiin dollar ah ka helo dowlado shisheeye iyo ilaha dhaqaalaha dalka sida garoonka diyaaradaha iyo dekadda caalamiga ah.